झापाका युवकको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ – Pradesh Network
झापाका युवकको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ
Posted on April 16, 2020 Author pradeshnetwork	Comment(0)
विराटनगर, ४ वैशाख । प्रदेश १ मा पहिलो पटक झापाका एक युवामा र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गर्दा पोजेटिभ देखिएकोमा स्वाब परीक्षण रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ ।
एक महिनाअगाडि दुबईबाट आएका झापा हल्दीबारीका युवकको आरडिटीमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि स्वाब परीक्षणको लागि कोशी अस्पताल विराटनगर ल्याइएको थियो । कोशी अस्पतालको रिपोर्टमा उनमा कोरोना भाइरस नदेखिएको उल्लेख छ ।
प्रदेशको सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार र्यापिड टेष्टमा पोजेटिभ देखिएपनि ती युवकसहित परिवारका चार सदस्यको स्वाब संकलन गरेर विराटनगर ल्याइएको थियो । कोशी अस्पताल विराटनगरमा पिसीआर बिधिबाट स्वाब परीक्षण भएपछि मात्र उनमा कोरोना भए नभएको यकिन हुने मन्त्रालयले जनाएको थियो ।
कोशी अस्पतालका प्रवक्ता डा. लक्ष्मीनारायण यादवले झापाको हल्दीबारीबाट आएको २१ जनाको स्वाबको नमुना परीक्षण गर्दा सबेको नतिजा नेगेटिभ आएको पुष्टि गर्नुभएको छ । आरडीटीमा पोजिटिभ हुनेबित्तिकै स्वाब परीक्षणको परिणाम पनि पोजिटिभ नहुने यसअघि देखिसकेको छ । चिकित्सकहरुका अनुसार पहिले कोरोनाको संक्रमण भएको र रोग प्रतिरोध क्षमताको कारण त्यसलाई परास्त गरेकाहरुको रगत परीक्षणमा आरडिटी पोजेटिभ देखिन्छ ।
पछिल्लो पटर्क यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गर्दा कैलालीकी एक महिलाको नेगेटिभ रिपोर्ट आएकोमा पिसिआर परीक्षण गर्दा पोजेटिभ रिपोर्ट आएको छ । मंगलबार सप्तरीसहित विभिन्न जिल्लाका ६ जनामा आरडिटी परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएकोमा पिसिआर परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ ।
हल्दिवारी गाउँपालिकामा विदेशबाट आएका ४ जना क्वारेन्टाइनमा र ५१ जना होम क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका छन् । हल्दिवारीमा ७० जना भन्दा बढी व्यक्ति दुबई, कतार, मलेशिया, बराइन, ओमन लगायतका देशबाट फर्किएका रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
विराटनगर, १२ चैत । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले देशव्यापी लागु गरेको लकडाउन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई प्रदेश नं. १ मा प्रहरीले पक्राउ गर्ने कार्य तीव्र बनाएको छ । प्रहरीले आज प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लाबाट ८ सय ९४ वटा सवारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । लकडाउन […]
विराटनगर, २२ वैशाख । विराटनगरका व्यापारीले लगातारको लकडाउनको कारण आफ्नो व्यवसाय धरासायी भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विराट व्यापार संघको अगुवाईमा व्यापारीहरुले प्रदेश नं. १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मोरंगका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ्गका प्रमुख मदन भुजेल र विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । व्यापारीहरुले लकडाउन […]